Nijirika iPad iPad 2 izy ireo hampandehanana Mac OS | Vaovao IPhone
Tamin'ny volana septambra lasa teo dia nampiditra fitaovana vaovao telo i Apple: ny iPhone 6s / Plus, ny Apple TV andiany fahefatra ary ny iPad Pro. Ity iPad vaovao ity dia tonga niaraka tamin'ny fisehoan-javatra vaovao manan-danja, toy ny mpandahateny efatra, ny processeur AX9 na ny 4GB an'ny RAM, saingy mpampiasa maro no diso fanantenana tamin'ny vaovao fa ny rafi-piasan'izy ireo dia iOS fa tsy kinova Mac OS, izay mametra ny famokarana bitika kely amin'ny vidiny azontsika raisina ho avo.
Rehefa avy nahita ny rafitra fiasan'ny Apple alohan'ny iPad Pro izy dia sarotra ny mieritreritra fa hiova izany ao anatin'ny fotoana fohy. Ary raha toa ireo mpampiasa izay manantena ny hahatongavan'ilay takelaka matihanina paoma miaraka amin'ny rafitra fikirakira birao, mahazo ny vaovao amin'ny fomba mahasosotra, ity horonan-tsary manaraka ity dia azo antoka fa hampisondrotra ny fisainany. Ny antony manosika dia karazana hack izay namela Mac OS hihazakazaka a iPad Air 2, fitaovana tsy dia matanjaka loatra noho ny iPad Pro.
Araka ny hitanao tamin'ny horonantsary teo aloha, ny iPad Air 2 dia mampiasa Mac OS, 7.5.5 ary 6.0.1. Mahatratra izany amin'ny alàlan'ny DOSPAD ary mba hanatanterahana izany, dia tanteraho ny baiko vMac. Ny kinova iOS ampiasain'ny demo iPad dia iOS 9.0.2, ny kinova farany mora tohin'ny jailbreak. Tsy misy fampahalalana fanampiny omena amin'ity horonantsary ity.
Ny zavatra tsara momba ilay horonantsary dia ny mahita fa azo atao ny mihazakazaka kinova Mac OS amin'ny iPad. Ny lafy ratsy dia hoe tena miadana tokoa ny zavatra rehetra. Na izany na tsy izany, ity karazana fampahatsiahivana ity dia mampatsiahy ahy ny fotoana naharetan'ny zava-drehetra tamin'ny solosaina taloha, izay ahafahan'ny fandefasana lalao mahatonga antsika hatory kely.
Heveriko fa tsy misy liana amin'ny fampandehanana Mac OS taloha amin'ny iPad-n'izy ireo ankoatry ny fahatsiarovany ny toetrany. Mazava ho azy, raha nahavita naka tahaka ny kinova nohavaozina izy ireo dia apetrakay daholo izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » IPad Air 2 Nijirika mba hampandeha ny Mac OS
Foxconn manaparitaka ny famokarana iPhone 6s
Ho tonga amin'ny 7GB ny iPhone 256 ary miaraka amin'ny bateria lehibe kokoa [RUMOR]